Wayne Rooney Oo Eedeeyay Xiddigaha Fashilmay Ee Man United: "Markii Laga Badiyaba Dhar Iyo Barfuun Xayaysiin Ayaay Bilaabaan" - Gool24.Net
Wayne Rooney Oo Eedeeyay Xiddigaha Fashilmay Ee Man United: “Markii Laga Badiyaba Dhar Iyo Barfuun Xayaysiin Ayaay Bilaabaan”
Wayne Rooney ayaa ku eedeeyay xiddigaha fashilmay ee Manchester United inay isku qarinayaan baraha bulshada, waxaana uu aaminsanahay in ciyaartoyda ay u baahan yihiin inay ka baqaan tababare Ole Gunnar Solskjaer.
Xiddigii hore ee Red Devils oo 13 sannadood ku qaatay Old Trafford ayaa sidoo kale qirtay inuu ku dhibtoonayo inuu daawado kooxdiisa hore.
Qaab ciyaareedkii liitay ee Manchester United ee bilowgii xilli ciyaareedka ayaa keentay in Jose Mourinho la ceyriyo bishii December.
Inkastoo ay soo kabsadeen markii uu Solskjaer yimid hadana waxa ay xilli ciyaareed ku dhameysteen sidii ugu xumeyd iyadoo laga badiyay sideed ka mid ah 12kii kulan ee ugu danbeysay ee ay ku jirto guuldaradii kulankii ugu danbeysay xilli ciyaareedka ka soo gaartay kooxda heerka labaad u dhacday Cardiff City.
Waxaana Rooney ka careysiiyay in ciyaartoyda ay u kala ordaan baraha bulshada si ay u xayaysiiyaan ganacsigooda marka kooxda laga badiyo.
Rooney oo haatan u ciyaara kooxda DC United ee horyaalka Mareykanka ayaa haatan ku qanacsan inuu arko in kooxda ay maamulayaan labo ciyaartoy hore oo uu ka soo garab ciyaaray.
Inkastoo Solskjaer iyo leyliyaha kooxda koowaad Michael Carrick ay isku dayayaan inay hirgeliyaan falsafadooda ciyaareed hadana Rooney ayaa ka walwal qaba in labadaan nin aysan laheyn hab maamul laga baqo oo ay lahaayeen macalimiintii hore.
Rooney ayaa yiri: “Waxaan qabaa in ciyaartoyda ay u baahan yihiin inay ka baqaan tababarayaasha. Waxay u baahan yihiin inay ka baqaan Michael Carrick. Waxay u baahan yihiin inay ixtiraamaan iyaga laakiin sidoo kalena ay ka baqaan.
“Ciyaartoydaan waxa ay inta badan jecel yihiin inay raadiyaan qof ay isku qariyaan, haddii ay ahaan laheyd baraha bulshada ama garoonka dhexdiisa.
“Sida ay kubada noqotay waa ay isbedeshay, bulshada ayaa isbedeshay. Waxaa haatan la wada isticmaalaa baraha bulshada.
“Waxaa jira ciyaartoyda inta ay guuldareystaan ka dibna baraha bulshada soo dhigaya dhar cusub ay soo saareen, barfuuno iyo wax walba ay xayaysiin karaan, taasoo aan aad u la yaabay.”
Ciyaartoyda ku kacay falalka uu ka hadlayo Rooney waxaa ka mid ah Paul Pogba kaasoo xayaysiiyay barnaamijkiisa Pogmoji ka dib markii la ceyriyay Jose Mourinho.
Jesse Lingard oo uruusatay calaamado hurdi ah oo ka badan inta gool iyo caawin uu sameeyay xilli ciyaareedkan ayaa isna soo bandhigay dharkiisa u gaar ah uu sameystay, halka Romelu Lukaku lagu eedeeyay inuu barfuun xayaysiis bilaabay.
Rooney ayaa hadalkiisa raaciyay: “Marka ay taageerayaasha hadlaan oo ay yiraahdaan maxaad waxaan u soo dhigteen? Waxay eedeeyaan dadka u qaabilsan iyaga suuqgeynta laakiin waa inay qaataan mas’uuliyada.
“Dadkaas idinka ayay idiin shaqeeyaan. Dadka suuqgeynta idinka ayay idiin shaqeeyaan. Aniguba waan leeyahay dad suuqgeynta igala shaqeeya laakiin wax aan aniga amrin ma soo dhigaan.”